Galaxy Attack: Alien Shooter 7.46 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 7.46 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
ဂိမ္းမ်ား အေႂကြေစ့ထည့္ ကစားရေသာ ဂိမ္းခံု Galaxy Attack: Alien Shooter
Galaxy Attack: Alien Shooter ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ကမ္ဘာမြေရဲ့နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်သင်၏လက်၌တည်ရှိ၏, ထိုတည်းသောအာကာသယာဉ်၏ထိန်းချုပ်မှုကို ယူ. ဂြိုလ်သားယငျရဲတို့ကနေကမ္ဘာမြေကာကွယ်ပေးသည်။ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုသင်က၎င်း၏မကောင်းသောအရန်သူများကိုထံမှဠာကယ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်အဖြစ်အတော်လေးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီအာကာသပစ်ခတ်မှုဂိမ်းထဲမှာသင်အန္တရာယ်ရှိသော enviroments မှာရန်သူများကိုတစ်ဦးပိုမိုကြီးမားသောအရေအတွက်အားရင်ဆိုင်နေရလိမ့်မည်။ ဂိမ်းတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ, သင်က၎င်း၏အပြည့်အဝသေစေလောက်စွမ်းရည်တိုက်ဖျက်မည်ရန်သင့်အာကာသယာဉ် upgrade ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
အားလုံးရန်သူများကိုရွှေ့ခြင်းနှင့်သတ်ပစ်ရန် * Touch ကိုမျက်နှာပြင်။
* သင့်ရဲ့လက်နက်တွေ upgrade သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းပါ။
* ကစားသူအများအပြားမုဒ်: 13vs 1, 1 vs
တက်ဘလက်နဲ့ကြီးမားတဲ့ screen များအတွက် optimized * အရည်အသွေးမြင့်ပုံရိပ်တွေ။
အာကာသတိုက်ပွဲကာလအတွင်းတက်ကြွကျွမ်းကျင်မှုကိုအသုံးပြုရန် * နိုင်ခြင်း။
* ဒီဂိမ်းအမျိုးမျိုးသောအခက်အခဲများအပေါ် 140+ အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူထုပ်ပိုးထားသည်။
ဖြည့်စွက်ဖို့စွဲငြိဖွယ်ရာမစ်ရှင်နှင့်အတူ * တင့်တယ်အဆင့်ဆင့်။
* သင့်ရဲ့သေနတ်နှင့်လေဆာ Upgrade ။
ဂန္အာကာသတိုက်ခိုက်ရေးခံစားကြည့်ပါ - တက် powered ။ က Galaxy တိုက်ခိုက် Download: ဂြိုလ်သားသေနတ်သမားယခု!
Galaxy Attack: Alien Shooter အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Galaxy Attack: Alien Shooter အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Galaxy Attack: Alien Shooter အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Galaxy Attack: Alien Shooter အား အခ်က္ျပပါ
india-market စတိုး 48.27k 18.96M
Galaxy Attack: Alien Shooter ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Galaxy Attack: Alien Shooter အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 7.46
ထုတ်လုပ်သူ Venus88 Studio
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://sites.google.com/site/venus88privacypolicy/
App Name: Galaxy Attack: Alien Shooter
Release date: 2019-05-24 17:00:45
လက်မှတ် SHA1: D0:BB:D1:18:F6:71:EF:A3:AA:17:D8:9C:71:CE:6A:B5:3F:42:41:85
အဖွဲ့အစည်း (O): " Chicken Studio"
Galaxy Attack: Alien Shooter APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ